“RW Hailemariam: Siyaasadda dibadda Itoobiya dhaqaale Diblomaasiyadeed xooga sareynaa” |
“RW Hailemariam: Siyaasadda dibadda Itoobiya dhaqaale Diblomaasiyadeed xooga sareynaa”
Addis-Ababa (estvlive) 12/09/2017
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Dessalgen ayaa maanta kulan la yeeshay Mas’uuliinta Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Itoobiya.
Hailemariam ayaa sheegay in diblomaasiyada Itoobiya ay Xoogan Salaysan diblomaasi dhaqaale uu ahaan doono ujeedada ugu muhiimsan ee Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa la hadlay madax ka mid ah howlgallada iyo saraakiisha sare ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee ku saabsan waxqabadka 2017 iilaa 2018.
Hailemariam waxa uu xooga saarey baahida loo qabo dhismaha awooda hay’adaha iyo awoodaha khayraadka, cilmi baaris ku salaysan dhaqaale iyo sidoo kale aqoonta iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta iyo diblomaasiyadda. Gaar ahaan, wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay dhisidda awoodda bini’aadinimo ee wasaaradda si loo xoojiyo kartidooda dhaqangelinta diblomaasiyadeed ee dhaqaale. Dhisidda kartida waa inay ahaato
qorshaha 2018 ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu intaa ku daray in wasaaraddu ay la shaqeyn doonto hay’adaha sare ee waxbarashada iyo hay’adaha kale ee munaasabadda maadaama mawduuca xiriirka shisheeye uusan ka tagi karin wasaaradda kaliya.
Hailemariam ayaa sheegay in diblomaasiyiin loo qoondeeyay dalal kala duwan oo adduunka ka mid ah ay tahay inay ka shaqeeyaan sidii loo dhiiri galin lahaa maalgashadayaasha dhabta ah ee gacan ka geysan kara horumarka dalka.
Maalgaliyeyaashu waa inay xoogga saaraan meelaha aadka u kala xulashada sida warshadaha wax soo saarka leh, haraga xoolaha iyo beeraha, iyo sidoo kale miraha iyo khudaarta kala duwan
Ugu dambeyntii Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Dessalgen ayaa dadaal Xoogan ugu jira sidii dalka Itoobiya uga mid noqon lahaa wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay